5 Talooyin Wax-ku-oolin Is-beddelka Moobilka Wax-ku-oolka ah ee kugu guuleysta Macaamiisha | Martech Zone
Waa tan aqoonta ku habboon ee aqoonta: boqolkiiba 52 ee ka mid noqoshada shabakadaha adduunka waxay ka yimaadaan taleefannada casriga ah Tirada dadka isticmaala mobilada ayaa cirka isku sii shareeraya. Waa halka ay dadka intiisa badani ka helaan badeecadaada ama adeegyadaada.
Shaki kuma jiro taas.
Laakiin iyada oo aan loo helin xalka webka moobiilka ee dareenka leh oo si fiican loo qaabeeyey ee ganacsigaaga, way adag tahay inaad la tartanto dadka kale. Ganacsiga e-commerce, tusaale ahaan, waxaa laga helay taas 55 boqolkiiba macaamiisha ayaa wax iibsigooda sameeyay markay ku ogaadeen badeecada moobaylkooda.
Ha ka tegin! Halkan waxaa ah 5 talooyin wax ku ool ah oo moobiil kor loogu qaadayo si loo kordhiyo heerka beddelaaddaada.
1. Xawaaraha Soo Kordhinta Mobilada Waa Ahmiyadaada Ugu Weyn
Xawaaruhu waa muhiim marka ay timaado goobaha mobilada.
Dhab ahaan, cilmi baaris ayaa muujinaya in websaydhada mobilada ee dhajiya 5 ilbidhiqsi ama ka dhakhso badan ay abuuri karaan iib ka sareeya kuwa gaabiska ah. Dadka u dhashay internetka uma dulqaadan karaan xawaaraha rarka oo gaabis ah. Waxaa loo arkaa inay habaar u tahay websaydhkaaga moobiilka.
Nasiib wanaag, waxaad sameyn kartaa habab badan oo aad ku hagaajiso dhibaatadan.
Iska yaree ku darista mobilkaaga. Tirada codsiyada adeegaha ee shabakadaada ayaa si weyn u saameyn kara xawaareheeda. Miyaad isticmaaleysaa trackers badan ama qalab falanqeyn ah? Bal u fiirso gudaha barnaamijkaaga softiweerka ah; laga yaabee inaad halkaas dhibaatada ka heli karto.
Weligaa ha iloobin kor ilaa hoos ogaanshaha. Waxaa laga yaabaa in faylasha qaarkood ay qas ku hayaan nidaamkaaga. Faylasha waaweyn sida waxyaabaha ku jira muuqaalka ayaa si weyn hoos ugu dhigi kara xawaaraha culeyskaaga. Marka, waxaad u baahan kartaa inaad yareyso faylashaada ku jira websaydhkaaga. Sawirada, xayeysiiska, iyo lambarka font waa dambiileyaasha caadiga ah ee tan.
Baro wax ku saabsan content taas oo u baahan in mudnaan la siiyo. Ku rid iyaga dusha sare ee boggaaga, oo ay tahay inuu marka hore soo raro ka hor inta aanad qaybta kale ee bogga ku jirin. Istaraatiijiyaddani waxay kordhin kartaa xawaarahaaga culeyska adoo tixgelinaya khibrada isticmaale UX ee goobta.
2. Dooro Naqshad Sameyn Jawaab Leh si aad ugu Diyaargarowdid Mobile
Naqshadeynta moobiilku way adag tahay in la abuuro. Waa inaad la qabsataa cabbirka shaashadda ee kala duwan. Laakiin baadi goobku intaas kuma eka. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa hanuuninta taleefanka iyo madal kale.
Waxaad diirada saari kartaa badhannada si sahlan loogu wareejiyo. Liiska ama qaybaha waa inay ahaadaan kuwo sahlan oo guji. Bog kasta waa inuu siiyaa isticmaalaha tilmaamo cad oo ku saabsan halka la tegayo markay rabaan inay wax ku dhammaystiraan sida ku dar shayga gaadhiga, tirtirida codsiyada, ama hubinta amarrada.
Qaabka naqshadeynta waa inuu noqdaa mid jilicsan. Waa inay waafajiso awoodaha qoraalka, qaraarada, iyo cabirka fiidiyaha. Kaliya xusuusnow, xalalka moobiilka waa in mudnaanta la siiyaa. Bogag aan dhammaad lahayn, qoraallo waaweyn, iyo waxyaabo ballaadhan oo muuqaal ah ayaa guud ahaan iska celinaya booqdayaashaada.
3. Ka saar Soo-saarrada aan Muhiimka ahayn iyo Fiidiyowyada loogu talagalay Isticmaalayaasha Mobilada
Kuwani pop-up pop-ups iyo xayeysiinta fiidiyowga ayaa burburin kara guud ahaan naqshadeynta websaydhka, iyo sidoo kale, heerka beddelkaaga sidoo kale.
Si kasta oo ay u fiicantahay naqshadeynta websaydhkaaga moobiilka, hirgelinta waxyaabo badan oo pop-up ah ayaa si weyn hoos ugu dhigi doona UX iyo qanacsanaanta macaamilka, taas oo horseedaysa heerka beddelaad hoose.
Halkii aad ka soo saari lahayd macdanta `` lead '', waxaad u badan tahay inaad heli doonto sicir barar sare iyo taraafikada oo yaraada. Xaqiiqdii, sida lagu sheegay daraasad ay sameeyeen Isbahaysiga Xayeysiiska Ka Wanaagsan, noocyada ugu neceb ee xayeysiinta moobiilka waa kuwan soo socda:
Fiidiyowyo iswada-ciyaar ah
Xayeysiisyada oo leh tirinta kahor intaadan eryin
Bogagga shabakadda moobiilka ee leh wax ka badan 30% xayeysiiska
4. Ka Deyr Fudud Markaad Joogto Aan Waxba Bixin
Ka tagida goobta wax iibsiga maahan wax caadi ah. Sababtuna waxay ku jirtaa naqshadeynta liidata ee bogga wax lagu iibsado. Waxaa jira sababo badan oo ah sababta ay macaamiisha uga tagayaan alaabada gawaarida wax iibsiga iyaga oo aan dhab ahaan u iibsan. Caadi ahaan, ma heli karaan badhanka saxda ah ee la riixo, ama bogga ayaa aad u adag in la maro.
Sidaa darteed, bogga wax lagu bixinayo waa in lagu ilaaliyaa nadaafad iyo wax yar. Booska cad iyo ku fidinta talaabooyinka bogag badan ayaa kaa caawin doona. Badhamadu waa inay macaamiisha ugu jiidaan nidaamka saxda ah ee nidaamka lacag-bixinta.
5. Kudar Foomamka Kale ee Bixinta
Marxaladda lacag-bixinta ayaa ah barta aad ugu beddelan karto martida macaamiil dhab ah. Sidaa darteed, waa in loo hagaajiyaa macaamil macaamil iyo beddelaad sarreysa.
Ha filanin in dhammaan macaamiishaadu ay u isticmaali doonaan PayPal inay ku bixiyaan amarradooda.
Ganacsiga e-commerce waa inuu had iyo jeer tixgeliyaa dabacsanaanta. Marka laga reebo kaararka deynta ama bixinta bangiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto Apple Pay, oo Google ayaa lacag ku siiya marinnada lacag bixinta ee boggaaga. Jeebka dijitaalka ah ayaa si tartiib tartiib ah u soo baxaya, taas oo ganacsiyada e-commerce ay tahay inay sii sheegaan oo ka faa'iideystaan.
Maaddaama taleefannada casriga ahi ay sii wadaan inay xukumaan adduunka, ganacsiyada waa inay bartaan la qabsiga.
Waxaa jira fursado badan oo ku yaal dukaan taleefanka gacanta. Waxa kaliya ee ay qaadataa waa naqshad wanaagsan iyo ujeedo joogto ah. Macaamiishaada ku farxi adigoo u maraya xalkaaga shabakada moobilka adoo ka dhigaya wax walba si habeysan.
Laakiin sidoo kale waxaa jira qaab wanaagsan oo wax lagu qabto. Waxaad caawimaad ka heli kartaa xirfadlayaasha. Dhiirrigelinta moobiilku way adkaan kartaa, laakiin iyadoo lagaashanayo naqshadeynta websaydhka 'Derry' dhammaantood waad ku samayn kartaa finesse. Waxaa intaa sii dheer, waad keydin kartaa waqti inaad diirada saarto qaybaha kale ee ganacsigaaga.
Tags: auto-ciyaaro videoisbahaysiga loogu talagalay xayeysiinta wanaagsanxayeysiiska tirintawareejinta moobiilkahagaajinta mobiladagujisid mobilexawaaraha mobiladaxawaaraha bogga mobiladaisbaaro bixin aan xuduud lahayn